Bit By Bit - agba nwere - 4.4.2 Heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta
Nwere ejikari tụọ nkezi mmetụta, ma mmetụta nwere ike ịdị iche maka dị iche iche ndị mmadụ.
Nke abụọ isi echiche maka akpụ akpụ n'ofè mfe nwere bụ heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta. The nnwale nke Schultz et al. (2007) dị ike na-egosi otú otu ọgwụgwọ nwere ike dị iche iche mmetụta na ụdị dị iche iche nke ndị mmadụ (ọgụgụ 4.4), ma nke a analysis of heterogeneity bụ n'ezie nnọọ ihe ọhụrụ n'ihi ihe analọg afọ nnwale. Kasị analọg afọ nwere abuana ole na ole nke sonyere na-emeso dị ka kennyeghari "wijetị" n'ihi na obere ihe banyere ha na mara tupu ọgwụgwọ. Na dijitalụ nwere, Otú ọ dị, ndị a data constraints ndị na-erughị nkịtị n'ihi na-eme nnyocha agbasaghị nwere ihe sonyere na ịmatakwu banyere ha. Na nke a dị iche iche data na gburugburu ebe obibi, anyị nwere ike na-eme atụmatụ heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta iji nye clues banyere otú ọgwụgwọ na-arụ ọrụ, otú ọ pụrụ isi meziwanye, na otú ọ ga-ezubere iche ndị na-akasị abụ na-erite uru.
Ihe atụ abụọ nke heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta na onodu nke na-elekọta mmadụ norms na ume ojiji si imekwu nnyocha na Home Energy Reports. Akpa, Allcott (2011) na-eji nnukwu sample size (600,000 ezinụlọ) ka n'ihu ahụ kewara sample na-eme atụmatụ mmetụta nke Home Energy Report site decile nke tupu ọgwụgwọ ume ojiji. Mgbe Schultz et al. (2007) chọpụtara ọdịiche dị n'etiti arọ na ìhè ọrụ, Allcott (2011) chọpụtara na e nwekwara esemokwu n'ime arọ na ìhè ọrụ otu. Dị ka ihe atụ, kpụ ọkụ n'ọnụ karịsịa ọrụ (ndị nọ n'elu decile) belata ha ume ojiji ugboro abụọ ka onye nọ n'etiti arọ onye ọrụ otu (ọgụgụ 4.7). Ọzọkwa, estimating mmetụta site tupu-ọgwụgwọ omume kpughekwara na ọ dighi boomerang mmetụta ọbụna maka lightest ọrụ (ọgụgụ 4.7).
Ọgụgụ 4.7: Heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta na Allcott (2011) . The ọnụ ke ume iji dị iche n'ebe ndị mmadụ nọ dị iche iche deciles nke ntọala ojiji.
Na a yiri ọmụmụ, Costa and Kahn (2013) kọrọ na ndị na irè nke Home Energy Report nwere ike iche iche dabere na a soò na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa na ọgwụgwọ nwere ike-emekwa ka ndị mmadụ na ụfọdụ echiche na-amụba ha ọkụ eletrik ojiji. Ya bu, ha kọrọ na ndị ahụ Home Energy Reports nwere ike na-eke a boomerang mmetụta n'ihi na ụfọdụ ụdị nke ndị mmadụ. Na-amata na nke a ga-ekwe omume, Costa na Kahn chịkọtara Opower data na data zụrụ n'aka a-atọ ndị ọzọ aggregator nke gụnyere ozi dị ka òtù ndọrọ ndọrọ registration, onyinye na gburugburu ebe obibi òtù, ma ulo-ekere òkè ogbara ohuru mmemme. Na nke a na merged dataset, Costa na Kahn chọpụtara na Home Energy Reports emepụta agụnye yiri mmetụta maka sonyere na dị iche iche echiche; e nweghị ihe àmà gosiri na ìgwè ọ bụla gosipụtawo boomerang mmetụta (ọgụgụ 4.8).
Ọgụgụ 4.8: Heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta na Costa and Kahn (2013) . The atụmatụ nkezi ọgwụgwọ mmetụta maka dum sample bụ -2,1% [-1,5%, -2,7%]. Site na ijikọta ọmụma si nnwale ozi banyere ezinụlọ, Costa and Kahn (2013) na-eji a usoro nke mgbakọ na mwepụ ụdị na-eme atụmatụ na ọgwụgwọ mmetụta maka ihe aha iche iche nke ndị. Abụọ atụmatụ e mere na-ọkọnọ òtù nke ọ bụla n'ihi na atụmatụ e mere adabere na covariates ha gụnyere na ha na ndekọ ọnụ ọgụgụ ụdị (lee ịdị 4 na model 6 na Isiokwu 3 na Isiokwu 4 na Costa and Kahn (2013) ). Dị ka ihe atụ a na-egosi, ọgwụgwọ mmetụta nwere ike ịdị iche maka dị iche iche ndị mmadụ na atụmatụ nke ọgwụgwọ mmetụta na-abịa site mgbakọ na mwepụ ụdị pụrụ adabere na nkọwa nke ndị ụdị (Grimmer, Messing, and Westwood 2014) .
Dị ka abụọ ndị a maa atụ, dijitalụ afọ, anyị nwere ike na-esi estimating nkezi ọgwụgwọ mmetụta na-estimating ndị heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ sonyere na anyị maara na ihe banyere ndị sonyere. -Amụ banyere heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta nwere ike ezubere iche nke a ọgwụgwọ ebe ọ bụ kasị dị irè, na-enye ihe ndị na-akpali ozizi ọhụrụ nke mmepe, na-enye hints banyere a-ekwe omume usoro, isiokwu ahụ m now atụgharị.